श्रीमानले बुढेसकालमा अर्कैको श्रीमती लिएर फरार, श्रीमती रु*दै आइन मिडियामा-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – Ap Nepal
September 13, 2021 339
सगैँ जिन्दगी बिताउने भनेर बिबाह गर्छन । तर बुढेसकालमा जब साहाराको आवस्यक हुन्छ त्यही बेला आफ्नो श्रीमान या श्रीमती जो सगँ साथमा जिन्दगी बिताउने भनेर बिबाह गरेकोले नै साथ छोडेर हिन्दा कस्को पो मन थामिएला र ? यस्तै अवस्था छ अहिले मुना श्रेष्ठको । बिहे गरेर छोरा छोरीको बिबाह गर्ने उमेर भै सकेको अवस्थामा उनका श्रीमानले गाँउकै अर्कै कि श्रीमती लिएर हिडेका छन ।
सुनसरीको भा. सि. नगरपालिका -3 झुम्का घर भएकी मुना श्रेष्ठ अहिले श्रीमानले छोडेको भन्दै मिडियामा आएकी छिन । एक्काईस वर्ष अघि कुमार श्रेष्ठसगँ बिबाह गरेकी मुना श्रेष्ठका अहिले दुई छोरा छन । दुई छोरा पनि ठुला भै सकेका मुनाले बताइन ।
तर उनका श्रीमान भने छिमेकीको श्रीमती लिएर फरार भएको उनले बताइन । एक महिना अघि आफू घरमा नभएको अवस्थामा छोरालाइ मोटरसाइकलमा झुम्का जाने भन्दै झुम्का पुर्याउन लगाएको मुनाले बताइन ।
आफु चतारा मलामी गएको बेला कुमार घरबाट हिडेको उनले बताइन । सामान्य ज्वरो र रुघाखोकीका बिरामी भएका कुमार घरबाट हिड्दा आफ्नो औषधि र कपडा बोकेर गएको उनले बताइन । आफू घर आएर फोन गर्दा आफू इटहरीमा भएको र केहिबेरमा घर आउने भनेको तर त्यसपछी भने कुनै सम्पर्क हुन नसकेको मुनाले बताइन ।
घर बनाउने ठेक्का गर्दै आएका कुमार एक्कासि घर छोडेर हिडेको केही दिन पछि एकजाना छिमेकीको श्रीमती सरिता बस्नेत पनि हराएको उनले बताइन ।
कुमारको सरिता बस्नेतसगँ अगाडिदेखि नै गाउँघर तिर हल्ला भएको मुनाले बताइन । उनिहरु पहिले देखि नै बोल्ने सगैँ हिड्ने गरेको आफुले अन्यबाट सुनेको मुनाले बताइन । तर आफुले श्रीमानलाइ सोधपुछ गर्दा भने त्यस्तो केही होइन भन्दै झर्किने गरेको मुना बताउछिन ।
सगैँ हिनेको कुरा धेरै चोटि सुनेपछी आफुले सरितालाई पनि त्यो कुरा भन्दा तेस्तो केही होइन आफुले दाई मानेको जवाफ सरिताले दिएको मुनाले बताइन ।
तर कुमारको मोबाइलमा राती दुइ/ तीन बजे पनि सरिताको फोन आउने गरेको आफुले थाहा पाएको मुनाले बताइन । श्रीमान भने मुनाको अगाडि सरिताको फोन आउदा खासै वास्ता नगरी बोले जस्तो गर्ने गरेको उनले बताइन । आफुले त्यस बारेमा सरितालाई फोन गरेर बुझ्दा काम हुदा कहिलेकाही फोन गर्ने गरेको जवाफ सरिताले दिएको र त्यस्तो नराम्रो केही नभएको, घर छोराछोरी भएको मान्छेको बारेमा केही हल्ला नगर्नु यदि गाउँमा हल्ला भए आफू मुख देखाउन नसक्ने भन्दै यदि यस्तो हल्ला भए तपाइँको घरमा आइ झु*न्डिएर म*र्ने भनि सरिताले आफुलाई भनेको मुनाले बताइन ।
तर अहिले केही दिनको फरकमा दुबै जना हराउदा पहिले पनि सगैँ हिड्ने गरेको हुनाले उनिहरु दुबै जना सगैँ छन भन्ने गाउँ तिर हल्ला भएको र आफुलाई पनि त्यस्तै लागेको उनले बताइन । अहिले दुबै जनाको फोन सम्पर्क हुन सकेको छैन । उता सरिताका श्रीमानले भने अहिलेसम्म सगैँ गएको कुनै प्रमाण नभएकोले आफू त्यसबारेमा कुरा नगर्ने तर ३५ दिन पछि प्रहरीमा हराएको उ*जुरी दिने मुनालाई बताएको उनले सुनाइन ।
यदि गएको भए पनि अब आफू नखोज्ने र फिर्ता पनि नल्याउने सरिताका श्रीमानले आफुलाई भनेको उनले बताइन । मुना भने आफ्नो श्रीमानलाइ सम्पर्कमा आउन आग्रह गरिन । साथै उनले आफू जहाँ भए पनि लिन आउने भन्दै सबैलाइ खोजी गर्न सहयोग गरिदिन अपिल पनि गरेकी छिन ।
Prev“विदेशबाट छिट्टै फ,र्कन्छु भन्नुहुन्थ्यो कार्टुनमा प्या, क भएर आएको अस्तु हात लाग्यो” भक्कानिदै भाउजुले भनिन्
Nextवेवास्ता नगरौं हृद’ यघात हुनुअघि शरीरले दिन्छ यस्ता ५ संकेत, वे; वास्ता गर्दा ज्यानै जानस’ क्छ ?